ट्राफिक कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ ? कुन माध्यमबाट जेनेरेट गर्न सकिन्छ ?
by Anuj Bhai April 23, 2020
ट्राफिक जेनेरेट गर्ने माध्यमहरु अनलाईनमा धेरै हुन्छन् । जुनसुकै स्तरको ब्यापारिक कम्पनीहरुको ट्राफिकहरु इन्टरनेटको माध्यमबाट खोज्न सक्नुहुन्छ । बितेका अघिल्लो समयमा यसरी ट्राफिक खोज्न सम्भव थिएन । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाहरुले विज्ञापन दिएर जसरी परम्परागत ढंगले आफ्नो उत्पादन वा सेवाको लागी ट्राफिकहरु जेनेरेट गर्दथे, ति अनलाइन जस्तो सजिलो र सस्तो थिएन ।
प्रभावकारीताको हिसाबले पनि यो अब्बल थिएन । ति विज्ञापनहरु निश्चित क्षेत्र, निश्चित उमेर, निश्चित कार्यक्षमतालाई लक्षित गरेर प्रचार प्रसार गर्न सकिँदैनथ्यो । त्यो प्रकारको प्रचार प्रसार शैली ज्यादै भद्ध र कम प्रभावकारी हुन्थ्यो । जसको कारण ब्यापारिक कम्पनीहरुको खर्च बढी र ट्राफिक कम हुन्थ्यो । अझै पनि रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाहरुलाई विज्ञापन एजेन्सीहरुले राम्रै विज्ञापन दिइरहेको हामीले पाउँछौं । तर, आजको युग डिजिटल युग हो । अबको विज्ञापन कुन उमेर समुहलाई, कुने लोकेशनकालागी, कुन वर्गका मानिस आफ्नो कम्पनीको उत्पादनलाई बेच्न लागेको हो सबै पत्ता लगाएर गर्न सकिने मार्केटिङको जमाना आइसकेको छ । जुन अनलाइन मार्केटिङमा मात्र संभव छ ।
पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालका १ करोड मानिसहरुले फेसबुक प्रयोग गरिरहेका छौं । १ करोड मध्ये कति मानिसहरु कुनै ब्यापारिक कम्पनीको ‘ट्राफिक’ बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ? त्यसलाई कसरी छनौट गर्ने ? उदाहरणको लागि मोटर साइकल कम्पनीको ‘ट्राफिक’ कुन वर्गको हुन सक्छ ? कुन उमेर समुहको हुन सक्छ ? कुन क्षेत्रका मानिसहरु हुन सक्छन् ?
पक्कै पनि १ करोड नै हुन सक्दैन । कति लाख मानिसलाई मोटर साईकल खरिद गर्ने क्षमता छ ? कुन उमेर समुहका मानिसलाई बढी मोटर साइकल खरिद गर्ने इच्छा हुन्छ ? कुन क्षेत्रका मानिसलाई बढी मोटरसाइकलको आवश्यकता पर्दछ ? यी सबैलाई लक्षित गरेर मार्केटिङ गर्न सकिने अप्शन अहिलेको डिजिटल मार्केटिङले दिएको छ ।
@पुनहिल घुम्न जादा, सन् २०१८ तिर ।
जुन फेसबुक मार्केटिङ, यूट्युब मार्केटिङ जस्तै अन्य धेरै इमेल मार्केटिङहरुमा पाइन्छ । ब्लगिङ, भ्लगिङ जस्ता इन्टरनेटका माध्यमबाट ट्राफिक जनेरेट गर्न सकिने अवस्था छ । यो पाठमा तपाईले बुझ्नै पर्ने कुरा, अनलाइन मार्केटिङमा ‘ट्राफिक’ ज्यादै महत्वपूर्ण पाटो हो । अनलाइन मार्केटिङमा सफल हुन चाहनेको लागि एक नं. विषय नै ट्राफिक हो । ट्राफिक बिनाको अनलाइन मार्केटिङ कल्पना सम्म पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले अनलाइन मार्केटिङ गर्न चाहनेले ज्यादै मिहिन ढंगले ट्राफिकको बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
मैले अहिले सम्म अमेरिकन कम्पनीको एउटा अनलाइन कोर्ष बेचिरहेको छु । मैले नेपाली बजार भित्रै मार्केटिङ गरिरहेको छु । मेरो महत्वपूर्ण ट्राफिक श्रोत भनेको फेसबुक, युट्यूब, ब्लगिङ हो र इमेल मार्केटिङ पनि हो । मैले फेसबुक, युट्यूब, ब्लग र इमेलबाट जेनेरेट गरेको ट्राफिकसँग डिल गरेर मैले विक्रि गर्ने कोर्षहरु विक्रि गरिरहेको छु । तपाई पनि अनलाइन मार्केटिङ क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ अथवा यसमा आफ्नो भविश्य खोज्दै हुनुहुन्छ भने कृपया ट्राफिकको बारेमा अत्यन्तै संवेदनशिल भइदिनुहोला । किनकी यो ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो, अनलाइन मार्केटिङको क्षेत्रमा ।
Tags: Anuj Bhai Blog, best business in nepal, business idea in nepal, business nepal, earn money online in nepal, good business in nepal, how to make money online in nepal, how to start online business in nepal, Internet Marketing, Internet Marketing In Nepal, make money online in nepal, Nepalese Internet Marketer Story, small capital business in nepal, top 10 business in nepal
अनुज भाई सामान्य इन्टरनेटमा काम गर्ने एक मजदुर हुन् । उनी आफुले भोगेका अनुभूतिलाई अरुसंग साट्न मन पराउँछन् । आफुले पाएको सफलताको सानो कहानी आफु जस्तै इच्छुक व्यक्तिलाई सिकाउनमा विशेष चासो दिन्छ । सन् २००९ तिर बाटै इन्टरनेटमा काम गर्ने रहर पलाए पनि उनको सफलता भने सन् २०१६ पछि मात्रै प्राप्त भयो । २०१६ पछि उनी अधिकांश समय आफ्नै घरमा बिताउछन् र निरन्तर इन्टरनेटमै नयाँ शैलीको काम गर्दै रमाउँछन् ।
बिजनेश गर्नेले यति कुरा ध्यान दिनुस्
कोरानाको समयमा व्यापार कसरी अगाडि बढाउने ?
चुनौतिले नै बिकल्प जन्माउछ : Anuj Bhai Dot Com
डिजिटल प्रडक्ट भनेको के हो ? यो प्रोडक्ट बेच्दा कति कमाई हुन्छ ?
पहिले नै लेखेको ब्लग भएपनि समय सापेक्ष हामी अनलाइन मार्केटिङ मा केही गर्ने भनेर अघि बढेका विध्यार्थीहरुको लागि उपलब्धि मुलुक लेख छ ।धन्यवाद ।।
करियरको सफलतामा सहि कोचको महत्व
कन्टेन्ट राइटिङ के हो ?
नयाँ कुराको आशा गरौं
Anujbhai © 2020. Website Developed by The Expert Developers of Anujbhai